कानूनी रूपमा फेरि पनि ओली नै प्रधानमन्त्री हुने पक्का : भीमार्जुन आचार्य
May 10, 2021 N88LeaveaComment on कानूनी रूपमा फेरि पनि ओली नै प्रधानमन्त्री हुने पक्का : भीमार्जुन आचार्य
काठमाडौं । संविधानविद भिमार्जुन आचार्यले फेरि पनि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने ठोकुवा गर्नुभएको छ । संसदमा बिश्वासको मत प्राप्न हुन नसकेलगत्तै मिडियामा आफ्नो धारणा राख्दै आचार्यले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम गठित बर्तमान सरकारले बहुमत गुमाएको अवस्थामा अब फेरि यही प्रक्रिया सुरु नहुने भएकाले सवैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमाले अध्यक्ष ओली […]
यी हुन् खनाल-नेपाल समुह छोडेर ओलीलाई विश्वासको मत दिने ७ जना एमाले सांसदहरू
May 10, 2021 N88LeaveaComment on यी हुन् खनाल-नेपाल समुह छोडेर ओलीलाई विश्वासको मत दिने ७ जना एमाले सांसदहरू
काठमाडौं । एमालेमा खनाल – नेपाल समूहलाई छोडेर सात जना सांसदहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विस्वासको मत दिएका छन् । खनाल – नेपाल पक्षतिर उभिँदै आएका नेकपा एमालेका सात जना सांसदले अन्ततः पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिएका हुन्। जसमध्ये एक जना सांसद पार्वती विशुङ्खे असन्तुष्ट माधवकुमार नेपाल र झलनाथ […]
माकुने गुटमा लागे बामदेव पत्नी तुलसाले दिइन् प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत
May 10, 2021 N88LeaveaComment on माकुने गुटमा लागे बामदेव पत्नी तुलसाले दिइन् प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत
काठमाडौं। साविक नेकपाभित्र उत्पन्न विवाद चरम अवस्थामा पुग्दादेखि नै तटस्थ बसेका एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु केही घण्टाअघि मात्रै माधव–झलनाथ समूहमा खुले । पार्टी एकताको नाममा तटस्थ बसेका उनको गतिविधि भने ओलीविरुद्ध नै भइरहेको थियो । सोमबार बिहान औपचारिक रुपमै माधव–झलनाथतिर खुले । तर, गौतम असन्तुष्ट पक्षतिर खुलेसँगै उनकी पत्नी तुलसा थापा […]
अन्तिम प’ल्ट नेपाल लगिदिनुस् भनेर वि’न्ति विसाउँदै थिईन् तर ओमनमै शोभाकाे प्रा’ण गयाे!
May 10, 2021 N88LeaveaComment on अन्तिम प’ल्ट नेपाल लगिदिनुस् भनेर वि’न्ति विसाउँदै थिईन् तर ओमनमै शोभाकाे प्रा’ण गयाे!
अर्घाखाँची। अर्घाखाँचीको अड्गुरी,झन्द्रेककी ३९ वर्षिया शोभा टण्डन थापाको ओमानको सललामा शुक्रबार नि’ध’न भएको छ । विगत १३/१४ वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारका क्रममा ओमानको सललामा घ’रे’लु कामदारकोरुपमा रहेकी शोभाको स्थानिय अस्पतालमा उपचारका क्रममा नि’ध’न भएको हो । उनको ९ दिनदेखि स्थानिय अस्पतालमा उपचार हुँदै थियो । उनलाई ज्व’रो र श्वा’स–प्रश्वा’समा समस्या रहेको र साथै कोरोना पोजिटिभ समेत […]
बिहीबार राति ९ बजेभित्र बहुमतीय सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिको आह्वान
May 10, 2021 N88LeaveaComment on बिहीबार राति ९ बजेभित्र बहुमतीय सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिको आह्वान
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बहुमतको सरकार गठन गर्न दलहरुलाई आहृवान गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भएपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने संसद सदस्यलाई तीन दिनभित्र दाबी पेश गर्न आहृवान गरेकी हुन् । यसअघि सोमबार मात्र संसदले विश्वासको […]
May 10, 2021 N88LeaveaComment on अब कसकाे नेतृत्वमा बन्दैछ नयाँ सरकार ? हेर्नुहोस यस्ता छन् ३ विकल्प
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशनमार्फत विश्वासको मत लिनबाट असफल भएका छन् । संविधानको धारा १ सयको उपधारा १ बमोजिम उनले संसदमार्फत विश्वासको मत लिन असफल भएका हुन । बैठकमा जम्मा खसेको दुई सय ३२ मतमध्ये प्रधानमन्त्री ओलीले ९३ मत प्राप्त गरेका छन् । यस्तै विपक्षमा एक सय २४ जनाले मत […]
May 10, 2021 N88LeaveaComment on काेराेना संक्रमण र मृत्युमा नयाँ रेकर्ड, संक्रमितकाे सङ्ख्या ४ लाख नाघ्याे
काठमाडाैं । पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा थप ९२७१ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । यस्तै १३९ जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि आइतबार ८८५० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने ८८ जनाको मृत्यु भएको थियो । पीसीआर विधिबाट १७ हजार ६२३ र एन्टिजेन विधिबाट ७८८ जनाको परीक्षण गर्दा जम्मा […]
यी हुन् प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन अनुपस्थित हुने एमाले सांसद (सूचीसहित)
May 10, 2021 N88LeaveaComment on यी हुन् प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन अनुपस्थित हुने एमाले सांसद (सूचीसहित)
काठमाडौं । नेकपा एमालेका २८ जना सांसदले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिन अश्वीकार गरेका छन् । संसदीय दलको ह्वीपविपरीत माधव नेपाल, झलनाथ खनालसहित २० जना प्रत्यक्ष निर्वाचित र ८ जना समानुपातिक सांसद सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अनुपस्थित भएका हुन् । अनुपस्थित हुने सांसदहरू: १. योगेश भट्टराई २. झलनाथ खनाल ३. पवित्रा निरौला खरेल ४. […]
May 10, 2021 N88LeaveaComment on प्रधानमन्त्री ओलीले पाएनन् विश्वासको मत, स्वतः पदमुक्त
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भएका छन् । विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसदबाट बहुमतले अस्वीकृत भएपछि प्रधानमन्त्री ओली स्वतः पदमुक्त भएका हुन् । प्रस्तावको पक्षमा ९३ मत परेको छ । प्रधानमन्त्री पदमा कायम रहन ओलीले १३६ मत पाउनुपर्ने थियो । संसदको सबभन्दा ठूलो दल एमालेका १२१ सांसद छन् । तर एमालेको माधवकुमार नेपाल […]
​प्रेमीले समय बर्बाद गरिदिएको भन्दै युवतीले ठोकिन मुद्दा
May 10, 2021 N88LeaveaComment on ​प्रेमीले समय बर्बाद गरिदिएको भन्दै युवतीले ठोकिन मुद्दा
काठमाडौं । आठ वर्षसम्म सम्बन्धमा रहँदा पनि विवाह नगरेपछि एक युवतीले आफ्ना प्रेमीविरुद्ध मुद्दा ठोकेकी छिन् । युवतीले प्रेमीले आफ्नो समय बर्बाद गरिदिएको आरोप लगाएकी छिन् । युवतीको उमेर २६ वर्ष हो । tuko.co.ke को रिपोर्ट अनुसार युवतीले आफ्ना प्रेमी सम्बन्धमा रहँदा कहिल्यै पनि सिरियस नभएकोले आफूले मुद्दा नै ठोक्नुपरेको बताइन् । युवतीले आफ्नो भविष्य […]